Ny sary manazava ny "Ataovy ny saron-tava" nataon'i Noma Ban | Famoronana an-tserasera
Sary an-tsaina "Mitafy Sarontava" manan-tsaina hanentanana ny olona
Manuel Ramirez | | mpanakanto, maro
Tsy misy holazaina momba ny hery afaka manana sarontava fandidiana mba hisorohana ny fihanaky ny COVID-19. Ireny sary an'habakabaka tsy mitombina ireny ihany "Ny manao saron-tava" dia tonga lafatra mba hampahafantarana ny fampiasana ilaina an'ity singa ity amin'ny fotoana manahirana antsika rehetra.
Noma Ban no mpanakanto ao ambadik'ireto sary 4 ireto izay amin'ny fahakingana maneho fihetseham-po samy hafa mifandraika amin'ity areti-mandringana ity, izay nanery anay hampiasa sarontava fandidiana ary koa ireo vita amin'ny lamba izay tsy maintsy hosasantsika isan'andro mba hampiasaina tsara.
Noma Ban dia mpanakanto ekena amin'ny fanoharana nataony hahatratra ny vokatra optique amin'ny karazany rehetraKa omeo sarontava izy ary ho hitanao ireto afisy 4 ireto izay tsy mamela olona tsy miraharaha ny hafatra mafonja ananany.
Tiako ireto afisoratra Wear A Mask hendry avy amin'ny mpamorona sary Noma Bar ireto. pic.twitter.com/h0EhdmVioT
- Eric Berlin (@puzzlereric) Aogositra 13, 2020
Nentina ireo fanoharana 4 ireo notanterahina tamin'ny fiaraha-miasa tamin'i McCann Health New York ary ny orinasa pharmaceutika Mucinex. Ny sary dia maneho ny seho andavanandro izay tsy maintsy hanaovanareo sarontava amin'ny tavanao mba hiarovan-tena amin'ny COVID-19.
Ny antony namoahana ireo 4 ireo ny sary dia noho ny filàna fampiasana sarontava. Ary mbola misy ihany ny olona tsy mahatakatra ny filan'ny fampiasana azy rehefa mampiasa ny fihanaky ny aerosol ity COVID-19 ity, ho iray amin'ireo manana ny isan'ny ampaham-bidy avo indrindra, hiparitaka tahaka ny nataony tamin'ity taona 2020 ity.
Ary ahoana no tsy tokony ho endrika kanto indrindra ny kanto milaza ny filan'ny planeta izao mba hanao ezaka hitazomana ny fiparitahan'ny COVID-19. Fanoharana tena mamorona izay mamporisika anao hizarao ho an'ireo mpiara-miasa sy namana ary koa fianakaviana.
Tsy nisy izany famoahana vitsivitsy izay nanehoanay Las Manarona ny New Yorker na ireo saron-tava disney tarehy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary an-tsaina "Mitafy Sarontava" manan-tsaina hanentanana ny olona
Ny mpanakanto dia mampiseho izay mety ho toetran'ny amperora romana amin'ny tena fiainana miaraka amin'i AI sy Photoshop
Tim Burton, mpamorona lehibe amin'ny fotoanantsika